Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : August 2013
ဂျူနီယာဝင်း၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၃
စည်းလုံးခြင်းအင်အားဆိုတာကို ငါတွေ့ခဲ့ရတာ ၈၈။
အနစ်နာခံခြင်းဆိုတာရဲ့သဘောတရား သဘောပေါက်ခဲ့ရတာ ၈၈။
အသက်ဆိုတဲ့အဖိုးတန်ရတနာကို စတေးဝံ့ကြတာကို ငါမြင်ခဲ့ရတာ ၈၈။
ဆုံးရှုံးမှု ဆိုတာ ဒါပဲလို့လက်ခံခဲ့ဖူးတာ ၈၈။
အသက်တွေစတေး၊ ဘ၀တွေပျက်၊ ရှင်ကွဲ သေကွဲများနဲ့
ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ ဖြစ်တယ်မရှိ၊ ပျက်ခြင်းသာ ရှိခဲ့ရ။
သူက နိုင်လိုက် ကိုယ်ကရှူံးလိုက် ဆိုတဲ့တရားကို ကျင့်ရင်းနဲ့…..
ငါလေ… … … … … … … … … … … … …
အဲသည်လို ကျခဲ့တဲ့သွေးစက်တွေအတွက် ငါရင်နာ….
သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်သတ္တိတွေကို ငါလေးစား….
သူရဲကောင်းတို့များ တခါသာ သေ……….
သူရဲဘောကြောင်တဲ့ ငါ့မှာတော့ အဖန်တစ်ရာသေ…။
ပွဲကြည့်ပရိသတ်တစ်ယောက်လို နေခဲ့တဲ့ငါ … …
သည်နေ့အထိ အသက်ရှင်နေတာ ရှက်ပါတယ်လို့ပဲ … …
စိတ်ထဲမပါတဲ့စကား အားနာပါးနာ ပြောရတော့မယ်လေ။
Posted by Maung Yit at 10:28 PM No comments:
Posted by Maung Yit at 11:08 PM No comments: